Musharax Faroole: Somaliland waxay kamid ah dalka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Musharax Faroole: Somaliland waxay kamid ah dalka Soomaaliya
MUQDISHO – Madaxweynihii here ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo ku sugan magaalada Muqdisho kana mid ah musharaxiinta jagada madaxweynaha ayaa sheegay in maamulka Somaliland uu weli yahay xubin ka tirsan maamulada kale ee dalka ka jira.
Cabdiraxmaan Faroole ayaa meesha ka saaray in Somaliland ka go’i garto Soomaaliya inteeda kale wax year kadib markii ay dhacday doorashadii Aqalka sare oo shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Doorashada aqalka sare ee halkan ka dhacday waxa ay ka dhigan-tahay in la helay aqalkii dalka isku keeni lahaa isla markaana umadda midayn lahaa ,mana lagu xirayo aragtiyada gaaban ee doorashadan laga eegayo “ ayuu yiri C/rixmaan Faroole.
Xildhibaankii koowaad oo loo doortay gudoomiyaha aqalka sare waxa uu ka soo jeedaa Somaliland ,taa macnaheedu waxaa weeye in Somaliland ay Somalia kamid tahay “ ayuu mar kale yiri Faroole oo hambalyo u diray madaxda cusub ee loo doortay aqalka sare.
Faroole oo hadda kamid ah xildhibaan ka tirsan Aqalka sare ayaa maalmihii lasoo dhaafay la kulmayey xubno ka tirsan Xildhibaanada Aqalka hoose ee la doortay si uu kalsooni uga helo marka doorashada madaxweynaha ee la filayo in ay ka dhacdo Muqdisho.
Guddoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka ayaa shalay loo doortay Cabdi Xaashi Cabdillaahi ,isagoo helay 43 kamid ah cododkii la dhiibtay iyadoona guddoomiye kuxigeen loo doortay Abshir Maxamed Bukhaari.
Ugu danbeyn Siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda Somaliland ayaa ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya.